ONLF oo Xoojisay Weerarada ay ku Qaadayso Ciidamada Atoobiya iyo Maleeshiyaad ka Goostay Kilalka. – Rasaasa News
Jul 8, 2014 atoobiya, ay, Ciidamada, Goostay, iyo, ka, Kilalka, ku, Maleeshiyaad, ONLF, oo, Qaadayso, Weerarada, Xoojisay
Jijiga, July 8, 2014 – Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [JWXO], ayaa xoojisay weerarada ay ku qaadayso fadhisimada ciidamada Atoobiya ay ku leeyihiin Ogadenia, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Ogadeniya.
Laga bilaabo Bishii May ilaa iyo June, Jabhada ONLF, waxay qaaday sagaal  weerar oo ay ku qaaday ciidamada Atoobiya, kuwaas oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan Ogadeeniya. Waxaa weeraradaas ay Jabhadu ku dishay boqol iyo seddex iyo labaatan askari  iyo maleeshiyaad aan tiradooda la sheegin.
Warar aan ka helay Jabhada ONLF iyo Ismaamulka Somalida Itobiya, waxay muujinaya in dagaalo isdaba joog ah ay ka dhaceen Ogaden labadan bilood. Sida ay warbixintu sheegtay dagaaladaaasi waxay u dhaxeeyeen ciidamada Atobiya iyo maleeshiyaadka taageera oo dhinac ah iyo Ciidamada Xoraynta Ogadeniya oo dhinac ah.
Dhinaca kale, warar xog ogaal ah oo aan ka helay Ismaamulka Somalida Itobiya, ayaa sheegay in ay jiraan ciidamo maleeshiya ah oo ka goostay, kuwaas oo uu wato gudoomiyihii degmada Baarey Daud Cabdi Dufanle [Daa,uud Axmaar].
Jabhada ONLF, ayaa sanooyinkii u dambeeyey ku jirtay cidhiidhi siyaasadeed iyo culays ciidan, waxayna bishii March ONLF samaysay isbadalo siyaasadeed iyo mid ciidan, oo kor u qaaday awooda Jabhada gudaha iyo dibadaba.
Ismaamulka Somalida Itobiya, oo awooda kaliya ee uu ku hawlgalaa ay tahay lacag, ayaa bixiyay malaayiin US Dollar oo lagu soo jiidanayo qurbojoogta. Waxaana meesha ka baxay wax u qabashadii shacabka degaanka ku dhibaataysan.
Baryahan waxaa isa soo taraya, khilaaf u dhaxeeya Ismaamulka Somalida Itobia iyo dadwaynaha, kaas oo ku salaysan sadbursi iyo baro kicin. Waxaana todobaadkii hor uu Ismaamulku u kala diray gabalada wufuud wada lacago lagu dheeli tirayo culayska ka jira gudaha.
Addis Ababa oo “Geneva Convention 1951” ku Dhaqada Dadka Kilalka Lagu Dhibo!